How'd it happen and more reports?: နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ သစ်နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဆွေးနွေးခန်း
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ သစ်နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဆွေးနွေးခန်း
အခု တပတ် ဦးခင်မောင်ညိန်း စီစဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ စကားဝိုင်းမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ အတည်ပြု ပြဌာန်းလိုက်ပြီး ကမ္ဘာဘဏ်လို အဖွဲ့ကြီးတွေက ချေးငွေ အကူအညီတွေ ပြန်ပေးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေပြု ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
ပါဝင်ဆွေးနွေးထားတဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေက (၁) ယခင် စီမံ ဘဏ္ဍာ ဝန်ကြီးဌာန အရာရှိဟောင်း စီးပွါးရေးပညာရှင် ဦးစိန်ဌေး (၂) ဘားမားတူဒေး အင်တာနက်သတင်းစာ အယ်ဒီတာ ဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ (၃) ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Burma Democratic Concern အဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးသိန်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
On September 10, 2012, The Chicago Council on Global Affairs unveiledaplan for attracting foreign direct investment to support long-term economic growth for the Chicagoland area. The detailed report highlights Chicago's strengths and competitive advantages, analyzes the strategies of leading global
Posted by Ko Nge at Wednesday, December 03, 2014
Kiyomi Compilation - (하리) 귀요미 송 HARI - Cutie Song ...
Cute Korean Baby Nayeon
How to download English - Myanmar dictionary for (...
ဘယ်လိုအခြေရှာကျမလဲ? ကျဆင်းလာတဲ့ ပြည်ပရေထွက်ကုန်တ...
The Lady of Burma!
မြန်မာ့ကမ်းလွန် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရင်းနှီးမြှ...
ကြက်ဥ နှင့် ကျန်းမာရေး
စတော့ဈေးကွက် ဒေါက်တိုင်သုံးရပ်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ...
၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ မြန်မာ့ဈေးကွက် အခြေအနေ!
မြန်မာပြည် ၏ နမိတ်ပုံ (သို့) နာရေးကူညီမူအသင်း(ရန်က...
သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်မျက် အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်
Jadeite Jade Necklace Sold For US$27.4 Million
စကာင်္ပူက အိမ်ခန်းဈေးရဲ့ လက်ရှိ အိမ်ခန်းပေါက်ဈေးတေ...
A Glimpse Into Myanmar
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး သဘာဝတွင်းထွက် ပတ္တမြားတွေ
၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ...
SPOTIFY MUSIC !
Myanmar Market Price!
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေး စတင်ဖို့ သင်စဉ်းစားနေပြ...
ဘလော့ရေးရင်းနှင့် သင့် ဘလော့တွေမှာ ၀င်ငွေရအောင်ရှာ...
မြန်မာနယ်တွေဖြစ်တဲ့ မြို့ငယ်၊ ရွာတွေမှာ ဖြစ်ပျက်နေ...
2105 Car permit for Myanmar working people oversea...
Burma's President U Thein Sein Answers Q & A
Myanmar: The Next Asian Tiger or Cat?
"Investing in Myanmar: Huge Opportunities Abound"
Myanmar Investment Opportunities - What you need t...
What you need to know ? Doing business in Myanmar!...
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ သစ်နဲ့ မြန်မာ့...
မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အြ...
How Burma Became The New Frontline In America's Wa...
အမိမြေက ကျေးလက်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂက...
Beyond Rangoon - Full Movie
တရုတ်ဘဏ်များရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ငွေစာရင်းနှစ...